Mitondra Fanazavana Momba Ireo Zavabaovao Ara-tsiansa Tsy Dia Taterina Na Aseho Loatra Ao Amerika Latina Ireo Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Hazina Cain-Houston
Voadika ny 18 Mey 2016 7:22 GMT
Vakio amin'ny teny English, नेपाली, Română , Français, русский, Ελληνικά, Español
Fango fototra ho an'ny tambajotra ara-tsiansa an'ireo bilaogera izay manoratra ambanin'ny #CienciaLatina (”Siansa Latina”). Sary nahazoana lalana.
Manakory ny fandrakofana ataon'ireo mpilaza vaovao ny fandrosoan'ny siansa ao Amerika Latina? Milaza ireo bilaogera ao amin'ny tetikasa Ciencia latina (“Siansa Latina”) fa tsy ampy izany. Na ao amin'ireo haino aman-jerim-paritra, na ny iraisam-pirenena, mbola voafetra ny fisian'i Amerika Latina fantatra erantany amin'ny hoe fandrosoana ara-tsiansa. Tondraka ireo vaovao momba ny kolikoly sy ny fiovàn'ny governemanta, fa tsy dia maheno firy ny vaovao mikasika ny fandinihana vitan'ireo astronoma Shiliana ianao, na ny fandalinana ao Yucatán, Meksika, izay mitondra antsika hanakaiky kokoa ny anton'ny fanjavonan'ny dinozaoro.
Eo ambanin'ny tenifototra #CiencaLatina, misy ny fandraisana andraikitra mba hampielezana ireo vaovao siantifika any amin'ireo tambajotra noforonin'ireo mpahay siansa ao amin'ny faritra. Ny tanjon'io dia ny famoronana ary fanitarana tambajotran'ny blaogin'ireo mpahay siansa ary handray anjara amin'ny ezaka mba hampielezana ny fahalalana ara-tsiansa. Ny hevitra ao ambadiky ny Ciencia latina dia hoe mila mtonga any amin'ny daholobe io torohay io, amin'ny fiteny mahazatra azy, mba ho lasa ampahany amin'ireo fokarohana sy fanavaozana zaraina manerana izao tontolo izao. Manazava ao amin'ny bilaoginy ny Ciencia latina.
La Red Latinoamericana de Blogs de Ciencia [Ny Tambajotra Amerikana Latina ho an'ny Blaogy ara-tSiansa] dia teraka mba hanangona ny famoahana ireo ezaka siantifika notarihan'ireo bilaogera avy amin'ireo firenena Amerikana Latina isan-karazany izay, miaraka amin'ny fitsipika azy manokana sy ny tombontsoany, miezaka ny hanolo ny hasarobidin'ny siansa eo anatin'ny tambajotra sosialy.
Tamin'ny famoronana ireny tranonkala ireny, nasehon'izy ireo fa tsy hoe ‘ tsy azo atao ‘ ny hisahana siansa ao Amerika Latina, na eo aza ny fahasarotana amin'ny resaka otrikarena iainan'ireo tobim-pikarohana marobe. Raha ny marina, tao anatin'ny folo taona farany, nisy fihatsaràna kely ihany ny fahaizana manadihady sy ireo tondro any amin'ny ankamaroan'ireo firenena ao amin'ny faritra.
Saika ny rehetra ao Amerika Latina dia nampitombo ny famokarany ara-tsiansa isan-taona. Brezila, ohatra, dia mitarika ny faritra any amina tarehimarika bolongany be, na amina haben'ny tetibola natokana ho an'ny fikarohana sy fampandrosoana, na amin'ny isan'ny fanontàna navoaka. Manana isanà mpikaroka betsaka indrindra raha oharina amin'ny isan'ny mponina (mpikaroka 3 isaky ny mpiasa 1.000—tarehimarika avo noho ny an'i Shina). Shili, amin'ny lafiny iray hafa, no mpitarika ao amin'ny fiarovana ny fananana ara-tsaina, mihazona ny isa lehibe indrindra amin'ireo fahazoandàlana (patanty) voapetraka isan-taona.
Amin'ny alalan'ny fampiasana ny marika #CienciaLatina, ny tambajotra dia manampy ihany koa ny fampiroboroboana sy fandefasana ny asa siantifika manokana avy ao an-toerana mba hisy fiantraikany eran-tany, ary miasa mba hanokana tranonkala koa izy mba hanetsehana ny kolotsaina siantifika ao amin'ny faritra, ny tsara indrindra mahatonga ny fandrosoan'ny siansa ao amin'ny faritra ho hita maso kokoa manerana izao tontolo izao. Amin'ny fanaovana izany, antenain'ireo blaogera ny hisarika ny sain'ireo Amerikana Latina tanora na antitra. Ny fandraisana siantifika maro ho mpiasa dia mety hiteraka ihnay koa fivondronana faoben'ireo manampahaizana sy mpikaroka, izay mety hiteraka fangatahana maro eo amin'ireo manampahefana amin'ny firenena, amin'ny fanizingizinana ny hisian'ny fikarohana tsara kokoa ao amin'ny tetikasam-panjakana, ary angondrakitra tsara kokoa ao amin'ny drafi-panjakana ho fampandrosoana .
Ny tambajotra sy ny vaovaony dia afaka arahana koa ao amin'ny kaonty Twitter-ny RedLBC ary amin'ny alalan'ny tenifototra #CienciaLatina.